RAMP: Mfe Nchọpụta Ọdịnaya Dị Mkpa N'etiti WordPress saịtị | Martech Zone
Anyị na-ahazigharị saịtị ntanetị maka ndị ahịa wee mezie saịtị ntanetị gaa na mmepụta. Site na WordPress, ọdịnaya dị na faịlụ ma chọta n'ime nchekwa data. Mmekọrịta faịlụ dị mfe, mana ịmekọrịta ọdụ data adịghị mfe. RAMP bụ ngwa ọrụ etolite iji nyere ụlọ ọrụ aka ịkwaga ọdịnaya WordPress ha n'etiti saịtị.
RAMP -enye gị ohere ime mgbanwe na gị staging gburugburu ebe obibi, mgbe ahụ bibiri inupụ mgbanwe ndị a na gị mmepụta saịtị. Ozugbo enyochachara ma kwado ọdịnaya, ị nwere ike ịga na peeji RAMP gị, họrọ mgbanwe ọdịnaya ndị a, ma kpoo ha na saịtị mmepụta gị.
RAMP ga-agba ọsọ nyocha ụgbọ elu pụrụ iche nke ga - ejide n'aka na ihe niile ga - aga nke ọma ma nye gị ohere ịlele ihe ị na - eme atụmatụ ịkwanye - gụnyere:
A ga-eke edemede, mkpado na ndị ọrụ ndị ọrụ ọzọ, ibe, wdg.
Mgbe etinyere nwatakiri na ogbe na-enweghi akwukwo nne na nna, ma ndi nne na nna adighi na mmeputa.
Otu umuaka ahoputara ebe udi ndi nne na nna adighi emeputa ma abughi mpaghara.
Ọ bụrụ na ahọrọ ihe oyiyi iji tinye ya na ogbe, mana ihe oyiyi ahụ ehichapụ na sistemụ faịlụ (na mpụga WordPress).
Ọ bụrụ na etinye peeji, edemede ma ọ bụ mkpado na menu ahọpụtara, mana adịghị adị na mmepụta ma ọ bụghị akụkụ nke ogbe.
Ọdịnaya agbanweela na mmepụta ma dị ọhụụ karịa mgbanwe na staging.
RAMP gụnyekwara bọtịnụ mpịakọta maka ogbe kachasị ọhụrụ. Ekele dịrị ndị ahịa anyị na HCCMIS, otu onye na-ahụ maka mkpuchi maka ndị njem, ndị mere ka anyị mara na ha na-anwale usoro.
Tags: ntinye ọdịnayaagbakasịRAMPnkenye ọnọdụ WordPressmmepụta wordpressnhazi isiokwu